२५ तारिखदेखि जियोनी इलाइफ एस ५.१ नेपाली बजारमा, भारतमा भने मुल्य घोषित - Technology Khabar
» स्मार्ट फोन » २५ तारिखदेखि जियोनी इलाइफ एस ५.१ नेपाली बजारमा, भारतमा भने मुल्य घोषित
Technology Khabar ३० कार्तिक २०७१, आईतवार
काठमाडौं, ३० कात्तिक । चीनियाँ स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी जियोनीले बनाएको विश्वको सबैभन्दा पातलो स्मार्टफोन जियोनी इलाइफ एस ५.१ नेपालमा पनि उपलब्ध हुने भएकोछ । नेपालमा जियोनीको मोबाइल बिक्री बितरण गर्दै अाएको टेलिटक प्रालिले यहि नोभेम्बर २५ तारिखदेखि जियोनी इलाइफ एस ५.१ बजारमा उपलब्ध हुने प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । यो फोनको बजार मुल्य कति भन्ने आधिकारीक जानकारी उपलब्ध हुन सकेन् ।
नेपाली बजारमा पनि यो फोन उपलब्ध भएको कम्पनीका बजार व्यवस्थापक गौरव हमालले जानकारी दिएपनि अन्य जानकारी थाहा नभएको बताए । तर कम्पनीसँग नजिक स्रोतका अनुसार कम्पनीले नेपाली बजारमा ल्याउन लागेको उक्त्त फोनको अर्डर अनुसार फोन अाउन नै बाँकी रहेको छ भने बजार मुल्य हाल सार्वजनिक नगर्ने अघोषित नीति रहेकोछ । भारतीय बजार मुल्यको आधारमा हेर्दा स्थानीय बजारमा यो फोनको बजार मुल्य ३० हजार रुपै‌याको हाराहारी हुनसक्ने अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।
उता जियोनी इलाइफ एस ५.१को मुल्य भारतमा भने घोषित भएको छ । यो फोन ई-कमर्श साइट ईबे डटइनमा १७ हजार ५ सय ४९ भारतीय रुपैंयामा उपलब्ध रहेको छ । ईबेले आफ्नो साइटमा ह्वाइट कलरको फोन उपलब्ध रहेको जानकारी दिएको छ ।
यो हेडसेट ५.१ मिमी पातलो छ तथा यसले गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डसमा आफ्नो नाम दर्ता गरिसकेको छ । यो फोनले फोर जी सपोर्ट गर्दछ ।
यो हेडसेट यसमा ओक्टा कोर १.७ गिगाहर्ज प्रोसेसरयुक्त रहेको कम्पनीले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । यसको स्क्रीन ४.८ इन्चको सुपर एमोलेड छ जसको हाई डेफिनिशन रिजोल्यूशन छ भने गोरिल्ला थर्ड जेन ग्लास जस्ता विशेषताहरु रहेका छन् ।
यसको रियर क्यामरा ८ मेगापिक्सलको छ तथा यो अटो फोकश हो । यसमा एलईडी फ्लास पनि छ । यसको फ्रन्ट क्यामरा सेल्फी लिनको लागि उपयुक्त छ भने यो ५ मेगापिक्सलको छ । यो फोनमा १ जीबीको र्याम छ भने यसमा १६ जीबीको इन्टरनल स्टोरेज छ तर यसमा माइक्रो एसडी सपोर्ट भने छैन् ।
बिल्ट इन एप्सहरु जस्तै फेक कल, ओ.टि.जी. मोड, डि.टि.एस. मोड, फ्लिप अलार्म आदि स–साना कुराहरुले गर्द यो मोबाइल आफ्नै वर्गहरुमा उत्कृष्ट बनाएको कम्पनीको दाबी छ । साथै, यसमा वेट ह्याण्ड मोड पनि उपलब्ध छ ।
यो एन्ड्रोइड ४.३ मा आधारित छ । यसको अन्य फीचरमा ४ जी, ३ जी, २ जी, वाईफाई जीपीएस तथा ब्लूटूथ छ । यसको ब्याट्रि २१०० एमएएचको छ । जियोनी ईलाइफ एस ५.१ को चीनमा बजार मूल्य १९९९ युआन तोकिएको छ ।
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७१, आईतवार
शाओमीको एन्ड्रोएड वानमा आधारित एमआई ए३ स्मार्टफोनमा आयो एन्ड्रोएड १० अपडेट
एलजीको भी २० स्मार्टफोन, एन्ड्रोयड नुगटमा आधारित पहिलो स्मार्टफोन
कूलप्याडको ‘कूल प्ले सेभेन’ स्मार्टफोन सार्वजनिक, पहिलो पटक ‘नोच डिस्प्ले’ डिजाइन